China Dual Biosafety System Ngwaọrụ maka SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test manufacturers na suppliers | Na-adanye Bio
SARS-CoV-2 Antigen ngwa
Nnwale Vaginosis Nje
Strep B Antigen Ule
Strep Nnwale Ọsọ
Nnyocha Antigen Cryptococcal
HSV 1/2 Antigen Nnwale
Nnyocha nyocha maka Cervical Pre-cancer na Cancer
Rotavirus / Adenovirus Ule
Salmonella Typhi Ule
Vibrio Cholerae O1 / O139 Ule
Vibrio Cholerae O1 Ule
Nnwale Antigen H. Pylori
H. Pylori Antibody Ule
Ọmụmụ & Ime Ime
Mgbasa ọsọ ọsọ
Nwa ebu n'afọ Fibronectin Rapid Test
Fungal Fluorescence nsị Ngwọta
PROM Ngwa ngwa ule
FOB Otutu Ule
Dual Biosafety System Ngwaọrụ maka SARS-CoV-2 Antigen ...
SARS-CoV-2 Antigen Rapid Ule
Dual Biosafety System Ngwaọrụ maka SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test
A na-eji Dual Biosafety System Ngwaọrụ maka SARS-CoV-2 Antigen Test maka nchọpụta qualitative nke akwụkwọ coronavirus (SARS-CoV-2) antigen nucleocapsid (N) antigen na mmadụ Throat / Nasopharyngeal swab samples na vitro. A ga-eji kit ahụ mee ihe dị ka ihe ngosi ma ọ bụ jiri ya na nchọpụta nucleic acid na nyocha nke ndị a na-enyo enyo na COVID-19. Enweghị ike iji ya dịka ntọala naanị maka nchoputa na mwepu nke ndị na-arịa ọrịa pneumonitis nke oria coronavirus bu oria, ọ naghị adabara nyocha nke ndị mmadụ niile. Ngwa ndị ahụ dabara adaba maka ojiji maka nnukwu nyocha na mba na mpaghara ebe akwụkwọ akụkọ coronavirus na-agbasa ngwa ngwa, yana inye nyocha na nkwenye maka ọrịa COVID-19. Ule na-ejede na ụlọ nyocha emebere nke ọma n’usoro iwu nke ndị ọchịchị obodo ma ọ bụ nke mpaghara.
TheStrongStep® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test bụ ngwa ngwa immunochromatographic nyocha maka nchọpụta nke COVID-19 antigen na nje SARS-CoV-2 na Throat / Nasopharyngeal swab mmadụ. A na-eji nnwale ahụ enyere aka na nyocha nke COVID-19.
Dị Mkpa: Ngwaahịa a bu n'obi iji ọrụ ọrụ naanị, ọ bụghị maka njiri onwe onye ma ọ bụ ule n'ụlọ.
Maka iji ụlọọgwụ ahụike ma ọ bụ ndị ọrụ ahụike naanị
Maka ndị ọkachamara ahụike naanị
Maka ule Midstream
Weta ihe ndị a dị na klọọkụ tupu ị nwalee. Mepee obere akpa ma wepu ngwaọrụ nnwale.
Ozugbo emeghere, a ga-eji ngwaọrụ nnwale ahụ mee ihe ozugbo.
Detuo ngwaọrụ nyocha na njirimara onye ọrịa.
Kwupu ihe nkpuchi nke ngwaọrụ a.
1. Tinye swab n'ime ọkpọkọ ahụ, gbajie swab ahụ na nkwụsịtụ ahụ, ka swab ahụ a tụrụ atụ dabara n'ime ọkpọkọ ma tụfuo mkpịsị elu.
2. ghasa mkpuchi nke ngwaọrụ.
3. Agbaji osisi na-acha anụnụ anụnụ.
4. OKP squeeR squee pịa afere igwe na-acha anụnụ anụnụ, gbaa mbọ hụ na mmiri mmiri ahụ niile daba na bekee.
5. Vortex ngwaọrụ ike.
6. Gbanwee ngwaọrụ ahụ, hapụ ka nchekwa echekwa gafere na ule nyocha.
7. Tinye ngwaọrụ ahụ na ebe ọrụ.
8. Na njedebe nke 15 nkeji gụọ nsonaazụ. Nlereanya dị mma nwere ike igosi nsonaazụ n'oge.
Mara: Nsonaazụ mgbe nkeji iri na ise nwere ike ọgaghị abụ eziokwu.
Mmachi nke ọnwụnwa
1. A ga-eji ihe ndị dị na kit a mee ihe maka nchọpụta qualitative nke SARS-CoV-2 antigens site na akpịrị swab na nasopharyngeal swab.
2. Nnwale a na-achọpụta ma ọ nwere ike ịdị ndụ (dị ndụ) na onye na-enweghị ike, SARS-CoV-2. Nlere ule dabere na ọnụọgụ nje (antigen) na ihe nlele ahụ ma ọ nwere ike ọ gaghị enwe ike ibute na nsonaazụ nje virus emere n'otu ụdị.
3. Nsonaazụ nnwale na-adịghị mma nwere ike ịdapụta ma ọ bụrụ na ọkwa nke antigen dị n’okpuru ala dị n’okpuru njedebe nchọpụta nke ule ahụ ma ọ bụ na anakọtara ma ọ bụ bufee ihe nlele ahụ na-ezighi ezi.
4. toghara ịgbaso Usoro Ule ahụ nwere ike imetụta arụmọrụ ule na / ma ọ bụ mebie nsonaazụ nnwale ahụ.
5. A ghaghị ịtụle nsonaazụ ule na njikọta na usoro nlekọta ahụike ndị ọzọ enwere maka dibịa ahụ.
6. Nsonaazụ nnwale dị mma anaghị achịkọta ọrịa nje ndị ọzọ.
7. Nsonaazụ nnwale na-adịghị mma bu n'uche ịchị ndị ọzọ na-abụghị SARS nje ma ọ bụ nje na-efe efe.
8. A ga-emeso nsonaazụ na-adịghị mma dị ka nkwenye ma kwenye na nyocha nke FDA nwere ikike, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, maka nlekọta ahụike, gụnyere njikwa ọrịa.
9. Ntuziaka nkwụsi ike gbadoro ụkwụ na-adabere na data nkwụsi ike sitere na nnwale influenza na arụmọrụ nwere ike ịdị iche na SARS-CoV-2. Ndị ọrụ kwesịrị ịnwale ụdị ngwa ngwa o kwere mee mgbe nnakọta nke ihe atụ.
10. Nghọta maka nnwale nke RT-PCR na nchoputa nke COVID-19 bụ naanị 50% -80% n'ihi oke ogo ma ọ bụ oge ọrịa na oge mgbapụta, wdg. SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Device's sensitivity is theoretically dị ala n'ihi Usoro ya.
Nke gara aga: SARS-CoV-2 Antigen Rapid Ule
Osote: Ngwaọrụ sistemụ maka SARS-CoV-2 & Influenza A / B Combo Antigen Rapid Test
Dual Biosafety System Ngwaọrụ Maka Sars-Cov-2 Antigen Test
Akwụkwọ akụkọ Coronavirus (SARS-CoV-2) Multiplex Real-T ...
Dual Biosafety System Ngwaọrụ maka SARS-CoV-2 Ant ...
Copyrights © 2016-2020: All Rights echekwabara. Ngwaahịa na-ekpo ọkụ - Sitemap
Akwụkwọ akụkọ Coronavirus Rapid Test Ket, Vibrio Cholerae O1 / O139 Antigen Combo Nnwale Nnwale, H. Pylori Ag Ngwa Ule Na-achọpụta Antigen, Igm / Iggrapid Ule Nnwale, Coronavirus Maka Covid-19 Ule, Coronavirus Antigen Nnwale Ngwa,